Shina: Rava ny Sivana Lahatsary Nataon’ny Fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 12:44 GMT
Rehefa hita maty ivelan'ny efitrano fonenany tany Ruian ny tanora mpampianatra iray, famonoantena no tsoakevitra avy tamin'ny tatitry ny polisy, fa miahiahy fanafenana ny marina kosa ny fianakaviany sy ireo mpianany. Olona an'arivony maro no nidina an-dalambe ho fanoherana, ary notsenaina tamin'ny herisetran'ny polisy. Noraketin'ireo mpanohitra ho lahatsary, tamin'ny alalàn'ny findainy, ilay fifandonana, ary nozarain'izy ireo tany amina tranonkala Shinoa fizarana lahatsary, fa haingana dia voafafa tao amin'ny aterineto ireo lahatsary ireo – ary tsy niverina nipoitra raha tsy tany amin'ireo tranonkala hafa sasany, toy ny notaterin‘ny blaogy Shinoa amin'ny teny Anglisy Danwei tamin'ny Talata. Ny tantara Dai Haijing – fiarahana nanavao tety anaty aterineto nataon'i Rolan Soong avy tamina blaogy iray hafa EastSouthWestNorth, na ESWN – dia, na eo aza ireo ezaka tsara indrindra nataon'ny manam-pahefana Shinoa, dia vai mainka nihazakazaka tety anaty aterineto.
Hatramin'ny nanoratan'i John Kennedy, avy ato amin'ny GVO, blaogy mikasika ny fanjavonan'ireo lahatsarin'ny hetsi-panoherana, farafaharatsiny telo no niverina teo amin'ny YouTube sy Photobucket, anisan'izany ny lahatsary eto ambany:
Mazava ny antony tsy itiavan'ny manampahefana hijerena ireo lahatsary ireo. Na eo aza ny tsy dia hatsaran'ny kalitaon'ilay fakantsary, tena mampiseho tsara ireo polisy midaroka mpanohitra ilay lahatsary. Nanonona mpaneho hevitra iray tao amin'ny bingfang.com ny ESWN tamin'ny filazana hoe ”Zarao any amin'ny tranonkala iraisam-pirenena ireo lahatsary sy sary ireo ary avelao ho hitan'izao tontolo izao ilay toa antsoina hoe ‘demokrasia’ ao Shina.” Tsy mazava loatra ny vokatry ny fanaovana izany – na iza na iza nizara ireo lahatsary tao amin'ny YouTube dia manana blaogy avokoa, http://dhj2006.blogspot.com/, izay ankehitriny dia mamerina ny hafatra ”Azafady! Blaogy voakatona mandritra fotoana voafetra!” Blaoginà profesora iray monina ao Etazonia no nanolo-kevitra hoe mora tohina ireo manampahefana satria manambara ny tsy fisian'ny fitokiana an'ireo andrim-panjakana izany.
Mety ho resaka fandaharam-potoana izany. Tany UK i Wen Jiabao tamin'ny Talata mba hiresaka momba ny fiovan'ny toetrandro miaraka amin'i Tony Blair, ary tsy fotoana tsara hivoahan'ny tantara toy itony izany. Miahiahy noho ny fitomboan'ny hetsi-panoherana karakaraina manerana ny firenena ireo manampahefana – manohitra ny fakàna tany fambolena, kolikoly, fandotoana – izany nolaizan'ny fanjakana fa 87.000 tamin'ny 2005, na teo amin'ny 240 isanandro teo. Ny filazana farany avy tamin'ny Ministeran'ny Fiarovam-bahoaka tamin'ny iray volana lasa izay dia mampiseho fihenana kely teo amin'ireo hetsi-panoherana ho an'ny tapany voalohany tamin'ny 2006, Ho lasa 39.000, fa mbola mihoatra ny 200 ao anatin'ny andro iray – ary talohan'ny raharaha Dai Haijing.
Tamin'ny Alatsinainy teo, namoaka fanambarana ny Tambajotran'ny Shinoa Mpiaro ny Zon'olombelona izay nilaza fa nisy ny famoretana nataon'ny manampahefana Shinoa talohan'ireo zavatra roa nitranga tamin'ny Antoko kaominista shinoa sy ny Lalao Olaimpika 2008. Miantso amin'ny famotsorana mpanao gazety, mpanoratra, mpisolovava ary mpikatroka maro nosamborina sy nogadraina tamin'ny volana lasa teo ilay fanambarana ary mamafy fa:
“Toa tsy lanin'ny vavonin'ireo manampahefana eo amin'ny fitondrana ny hoe efa lany andro ilay tetika niarahany nanaiky ho famoretana mafy mba hanamafisana ny fifehezany mialoha an'ireo zava-mitranga ara-politika na ara-tsosialy. Mihamiakatra ny fahatsiarovan-tena momba ny zo ao Shina ary niparitaka haingana dia haingana ireo hetsika fiarovana ny zo. Niteraka fiarahamonina, mpiaro ny zon'olombelona, mitombo sy mavitrika kokoa ny famoretana.”
Ity andian-dahatsoratra ao amin'ny ESWN ity dia maneho ireo fanamby maro natrehin'ireo blaogera niezaka ny hahazo tantara toy itony ho an'ny mpamaky/mpijery midadasika kokoa, fa tsy ny blaogera Sinoa irery ihany no voan'izany — te-haheno ny tantaranareo ihany koa izahay, na aiza na aiza misy anareo, mikasika ny fomba atao mba hijanonan'ireo lahatsary toa itony atyy anaty tambajotra rehefa toa manao ny faraheriny ireo manampahefana mba hamafàna azy ireny.
Ity rantsan'ny GVO ity dia fiarahamiasa eo amin'ny WITNESS sy ny Global Voices, ary mandritra ny herinandro ho avy dia hanasongadina lahatsary marobe nalaina olom-pirenena izahay, toy ny tamin'ireo lahatsary ireo, na avy amin'ny mpanitsakitsaka ny zon'olombelona tenany ihany, toy ny nosoratako mikasika ny tamin'ny herinandro lasa teo. Hitady lahatsary nalaina avy tamin'ny finday sy fakantsary izahay, maneho – toy ny tamin'ny lahatsoratra androany – ny fanoherana sy ny fanehoankevitra manoloana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, fa ihany koa olana maro mahakasika ny zo toy ny zon'ny pelaka, zon'ny mpifindramonina, gadra, herisetran'ny polisy, ary fandikana làlana ataon'ny tafika sy hatramin'ny zo ara-toekarena, sosialy ary ara-kolontsaina toy ny an'ny rano, trano, ary ny fahasalamana sy ireo sary maro hafa mifandraika amin'ny zon'olombelona. Mitady koa izahay sarin'ireo tafavoaka velona tamin'ny herisetra ary mitatitra ireo fanararaotana.
Raha toa ka mahita lahatsary mitovy amin'ireo ianareo, na ao amin'ny tranonkala fizarana lahatsary toy ny Google Video, Photobucket, BlipTV na ny YouTube, mailaka, na MMS, dia mba ampahafantaro anay, na amin'ny alalan'ireo fanehoankevitra etsy ambany, na amin'ny imailaka.
Ao amin'ny torolalana, hahita ambangovangony amin'ireo karazana sary tadiavinay ianao, ary ireto ny taridalana mikasika ny fomba hampakarana am-pilaminana ho ao amin'ny tranonkala ireo lahatsary ireo, ary mba hahafahanay mahita azy mora foana.